César Azpilicueta oo sheegay halka ay daciif ka tahay kooxdiisa Chelsea – Gool FM
Dajiye October 20, 2020
(London) 20 Okt 2020. kabtanka kooxda kubadda cagta Chelsea ee César Azpilicueta ayaa sheegay inay muuhiim tahay inay joojiyaan qaladaadka shaqsiyadeed ay sameynayaan, isla markaana ay qaataan go’aamo fiican ay ku diidayaan in la gaaro shabaqooda, iyo in la yareeyo cadaadiska dhanka weerarka ah.
Tababare Frank Lampard kooxdiisa ayaa ka baxday hal kulan iyadoon shabaqooda la taaban horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, iyagoo lumiyay dhowr dhibcood kaddib markii ay barbaro goolal badan leyska dhaliyay ay la galeen kooxaha West Bromwich Albion iyo Southampton.
César Azpilicueta ayaa u sheegay suxufiyiinta ka hor kulanka caawa ay kula ciyaarayaan kooxda Sevilla wareega group-yada ee tartanka Champions League:
“Marka difaacaagu yahay mid isku xiran, waxay taasi dhiirogalin siineysaa kooxda oo dhan, waxayna ka dhigeysaa weeraryahanadu inay abuuraan fursado”.
“Marka aad daciif ka tahay dhanka difaaca, waxaan dareemeynaa inaan u baahanahay inaan dhalino seddex ama afar gool kulan kasta”.
“Waa inaan hagaajino waxqabadka shaqsiga ah, isla markaana aan yareyno qaladaadka, oo aan gaarno go’aano fiican” ayuu yiri kabtanka kooxda kubadda cagta Chelsea ee César Azpilicueta.
Si kastaba ha noqotee, Chelsea ayaa laga dhaliyay goolal badan sababo la xiriira qaladaad uu galay goolhayaha reer Spain Kepa Arrizabalaga, kaasoo ku yimid kooxda reer London sanadkii 2018 80 qiimo dhan million euros.
"Lionel Meesi waa kan ugu fiican adduunka" - Lautaro Martínez